SHARAXAAD IYO SAWIRRO NOOCYO CAAN AH OO AH CHERRY HORE - CHERRY
Cherry - dhaqanka beerta caanka ah ee ugu badan ee ciriirigeena. Caucasus iyo Crimea waxaa loo tixgeliyaa meesha uu ku dhashay ee geedkan. Waa wax aan qabyo ahayn, oo ku kordha xaalad kasta, oo ay ku jirto degmada dhagaxa. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha ugu wanaagsan ee kobcinta iyo fruiting waa carrada bacrimiya iyo qoyaanka.
Waad ku mahadsan tahay shaqada beeraha warshadaha, johrigu wuxuu yeelan karaa dhadhan iyo midab kala duwan, noocyada kala duwana waxay ku kala duwan yihiin xoogga koritaanka geedaha iyo marka loo eego midhaha.
Ma taqaanaa? Si aad u hesho goosashada wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad doorato noocyada dhaxanta u adkaysta iyo is-qabatinka.
Kala duwanaantan waxaa loo yaqaan waqti dheer. In ka badan saddex qarniyaal ka hor, awowayaasheen ayaa soo goostay cherry this. Wakhti dheer oo noocaan ah middani waxay leedahay noocyo kala duwan - waxaad la kulmi kartaa digaagga laba-mitir iyo afar-mitir. Intaa waxaa dheer, ee beeraleyda wadajirka ah ee qarnigii la soo dhaafay, waxa ay ahayd cherry Vladimirskaya oo ku yaal qaybta ugu muhiimsan. Wax soo saarka noocaan kala duwan maahan. Miraha ay yar yihiin (ilaa 3.5 g). Si kastaba ha ahaatee dhadhanka miraha waxay kuu ogolaaneysaa inaad si guul leh u isticmaashid sida macmacaanka. Vladimir cherry waa fiicantahay labadaba cusbo oo la shaqeynayo. U qalmida qalajinta iyo barafka.
Geedka miro geedku wuxuu bixiyaa sanadka saddexaad (jeeriga bislaadaan bartamihii-July) ka dib markii laga beerto.
Cherry Vladimirskaya si fiican u dulqaadanayo xitaa dhaxan daran, sidaas darteed waxaa dheer ayaa loo googooyay gobollo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, at -30 ° C, kelyaha ayaa laga yaabaa inay xanuunsadaan, taas oo saameyn xun ku yeelan doontaa goosashada mustaqbalka.
Dhibaatada ugu weyn ee Vladimirskaya Cherry waa ku filnayn (sida waafaqsan heerarka casriga ah) iska caabbinta fangaska.
Waa muhiim! Tan iyo noocan oo kale ah cherry iska leh nafta-midho, pollinators waa in ay ahaadaan meel u dhow. Cherry Sweet waxaa loo tixgeliyaa habdhaqaajiye wanaagsan.
Gabadh gabar ah
Haddii aad dooratid cherry for hore beerta, fiiro u ilmaha. Geedkani wuxuu koraa laba mitir oo dherer ah (marar dhif ah - waxoogaa ka sareeya). Harvest waa la ururin karaa dhammaadka Juun. Miraha waa casaan mugdi ah, ballaaran (5-6.5 g), casiir leh, muuqaalkooda waxaa lagu qiyaasay by bannaanka u ah shanta mid ah top top. Dhagaxa si fudud ayaa looga soocaa saxarka. Gorma ayaa si qurux badan loo qaado. Ilmuhu waa baraf u adkaysta, wuxuu leeyahay iska caabin aad u sareeya ee fungi.
Qaar badan ayaa ka fekeraan inay cherry this noqdaan hogaamiyaha liiska noocyada ugu fiican. Kulankan waxaa sameeyey Melitopol jilayaasha adigoo ka gudbaya Amateur iyo Kievskaya-19 jeeriga.
Geedka laftiisa wuxuu koraa 2.5 mitir, wuxuu leeyahay dalal, dhumuc, dhajis dhif ah. Goosashada ugu horreysa waxaa la soo ururin karaa sanadka saddexaad kadib marka la beero. Laga soo bilaabo geed weyn, waxaad u guran kartaa ilaa 25 kg. Xilliga Juunyo. Kulanku wuxuu u adkaystaa abaar, fangaska iyo barafka.
Miraha waa weyn - 9 g (hoos xaaladaha wanaagsan - 15 g), sharaf leh, casaan dhalaalaya. Dhadhamiya - heerkulbeeg, cherry, saxarka macmacaanka. Waxay ka tirsan tahay qaybo kala duwan oo is-baddel ah waxayna ubaahantahay deris-dejiyeyaasha.
Cherry Gorgeous, farxiya ubax ee guga hore iyo delicious, miraha casaan mug weyn oo xagaaga. Ripens goor hore - tobanka sano ee labaad ee June, siinayaa goosashada wanaagsan.
Awoodda geedku waa dhexdhexaad. Ciriiri ku ah caabbinta barafka, waxay u diirisaa abaaro si fiican.
Kala duwanaanshahaan waxaa la helay iyada oo laga goynayay geedka geeska Shubinka iyo Vladimirskaya 60skii qarnigii la soo dhaafay. Ciriiri xayawaanka iyo miraha tayada leh.
Dhirta geedka weyni waa mid yar - ugu badnaan 2 mitir. Crohn - oo wareegsan, qaro weyn. Caleemuhu waa yar yihiin, midab-yar. Blossom guduudan bilawga hore iyo dhalid dalagga by bartamihii July. Isla mar ahaantaana, miraha ay u gaarto 3.7 g. Guga jiirku waa wareegsan yahay, casaan mugdi ah, oo lagu kala gooyay dhadhan macaan, dhadhan yar. Dhagaxyada adag way kala dhantaalaan. Ma aha mid u dulqaadanayo dhaxan, waxay leedahay iska caabin ah fangaska.
Ma taqaanaa? Dhirta cherry-fruited geedo badan yihiin adkaysi u cudurada, iyo sidoo kale waxay soo saaraan goosashada wanaagsan.
Gabadh shukulaato ah
Goobo kala duwan oo shukulaato ah ayaa la dhajiyay dhowaan, sannadkii 1996, iyaga oo ka tallaabay noocyo alaabooyinka macaamiisha ah ee Black iyo Livskaya.
Geedka wuu hooseeyaa, marar dhif ahna kor udhaca ilaa 2.5 mitir. Crohn dib u soo noqnoqda. Miraha Bocoyka Chocolate, ku dhowaad madow, ballaaran (3.5 g). Si dhadhanka - macaan iyo dhanaan, oo leh qadhaadh yar, xusuusta jeeriga.
Kala duwanaantan waxay bilaabmaysaa inay barbarato bishii Maajo iyo soo-saarka beeraha badhtamaha July. Geedka ugu horeeya waxaa la soo ururin karaa sanadka afraad ee geedka. Waa dalagga is-bacrin ah, laakiin si loo helo goosashada wanaagsan, xaafadda pollinators waa suurad wacan.
Shukulaatada waxay sameyn kartaa waqti dheer iyada oo aan waraabiyo, u adkaysata abaarta, fangaska iyo dhaxan.
Waa muhiim! Kala duwanaantani uma dulqaadanayo biyaha iyo shoogga, sidaas daraadeed qorraxda tooska ah ee qorraxdu waxay lagama maarmaan u tahay horumarinta geedka iyo goosashada wanaagsan.
Waxaa jira murano ku saabsan asalka noocyada kala duwan: Belgians ayaa lagu xisaabiyaa iyaga oo isu tarjumaya, Faransiisna waxay tixgeliyaan Hortense caruurtooda. Noqo sida ay tahay, cherry this, ka mid ah noocyo hore, si deg deg ah ku faafay qaarada oo dhan.
Miraha Hortense ayaa ah kuwa loo yaqaan 'oval-truncated', hal-tiirin (ku xiran keligiisa ama laba-labo). Maqaarka johnadu waa dhaldhalaalaan, casaan, si fudud ayaa looga saaray miraha bislaaday. Jidhku waa jilicsanaan, casiir leh, macaan, oo leh jimicsi yar.
Dalagga ayaa laga saaraa gobolka nus-qabqabta badhtamaha bisha Juun.
Hydrangea waxaa loo tixgeliyaa dalagga dufanka leh: xaaladaha qaarkood waxay soo saartaa midho yar, marmarka qaarkoodna waxay kugu farxi kartaa dhalidda. Cuntada waxay inta badan ku xiran tahay ciidda iyo aagga ay geedahaasi koraan. Waxyaalaha baaxada leh waxaa la siiyaa dhul aad u qallalan iyo heerarka sare. Meelaha ugu fiican - Dagestan iyo Kazakhstan.
Kala duwanaanshaha ukumaha. Dhirta leh taaj oo guud, xoog leh. Shpanka ayaa wax u dhimaya carrada waxayna udub dhexaad u tahay goob kasta. Geedku wuxuu leeyahay difaac barafeed oo fiican, wuxuu u nugul yahay fungi. Wuxuu bilaabaa inuu midho dhasho sanadka afraad kaddib marka la furo. Midhaha celceliska qiiqa (5 g), casaan, macaan iyo dhanaan, kobcaya dhammaadka Juunyo.
Waa muhiim! On carrada sabool ah oo aan xirashada sare Shpanka dhaawici karaan.
Waxay tilmaamaysaa noocyo Bisaylkiisa hore, dalagga kaas oo la saaro dabayaaqadii May. Ciriiri ahaan wax soo saarkooda. Sugitaanka miraha waa casaan mugdi ah, ku habboon nooc kasta oo ah wax soo saarka.
Macmacaanka ugu horeeya
Cherry Early Munaasabada - ultra hore (badhtamaha June) noocyo kala duwan (5-6 g) miraha midabka casaan cas. Wax soo saarka geedku wuxuu gaari karaa 20-25 kg.
Hilibka midhaha macmacaanka ugu horeeya waa jilicsan, oo leh dhadhan macaan. Dalagga ayaa si fiican u socdaalaya lana dhawray. Geedaha kala duwan ee noocaan ah waxay leeyihiin celcelis iska caabin ah fangaska, miraha, abaarta, uuna u dulqaado miraha si fiican.
Dhammaan noocyada geedka ayaa loo qaybiyaa laba kooxood:
Moreli - oo leh miro madow iyo casiir dhalaalaya;
si wanaagsan - miro khafiif ah iyo casiir cad.
Ogaansho noocyo kala duwan oo johannesel ah ayaa ugu habboon goobtaada, waxaad naftaada siin kartaa khudrad dhadhan leh oo leh kharash yar oo yar.